Iindaba -Liyintoni ithemba lomgangatho weplastiki osandula ukunyuka?
Umgangatho weplastiki we-PVC ngenxa yokusebenzisa kwawo izinto zinokuphinda zisebenziseke okusingqongileyo kwi-PVC, ngokuhambelana nokuhamba kwendalo kwanamhlanje, kunokuthiwa lushishino lokuphuma kwelanga. Ukujonga phambili kwikamva, ukutyibilika kwiplastiki yePVC kuya kuba nendawo ebanzi yophuhliso. Umgangatho weplastiki we-PVC nawo uya kuba mncinci kwaye ulungile abantu basebenzise umgangatho osebenzayo ukuya kumgangatho wendalo yonke, umbhali olandelayo ukuthetha ngokufutshane malunga nomzi mveliso weplastiki we-PVC kwikamva lophuhliso lwentengiso yase China.
I-01 isantya sophuhliso sikhawulezisiwe
Iindleko ezisezantsi zabasebenzi baseTshayina kunye nezinto zokwenza izinto zibeke isiseko esiqinileyo kumashishini asekhaya okuvelisa i-PVC flooring. Imakethi ebanzi kunye nokukhula ngokukhawuleza kwemfuno kutsala amashishini amaninzi nangakumbi ukungena kumzi-mveliso weplastiki we-PVC. Kulindeleke ukuba kule minyaka imbalwa izayo, izinga lokukhula kweemveliso zeplastiki zeplastiki kunye nentengiso ziya kugqitha kuleyo nayiphi na enye into, kwaye ibe yenye yezoqoqosho olukhula ngokukhawuleza.
Ukongeza kwiindawo zikawonke-wonke, umgangatho weplastiki we-PVC ulula ngokwendalo, ulinda ilangatye, ubungqina bokufuma, anti-skid kunye nezinye izinto, ezenza ukuba zezona zinto zithandwayo zokuhombisa kwixa elizayo. Ukongeza ekubeni isetyenziswe ngokubanzi kwiindawo zikawonke-wonke, iya kungena kwimakethi yokuhombisa ikhaya kwindawo enkulu, kwaye ububanzi bayo besicelo buya kwandiswa ngakumbi.
03 ukhuselo lokusingqongileyo kunye nempilo
Ngokwenza ngokuqhubekayo kunye nokuphuculwa kwetekhnoloji kunye nokulungiswa kwetekhnoloji, umgangatho weplastiki wePVC uya kuba ukhuselo lokusingqongileyo kunye nempilo, ukhuseleko luya kuphuculwa kwaye luphuculwe, ukusetyenziswa ngokukuko kwezixhobo kuya kuba phezulu, kunye nomgangatho weplastiki we-PVC uya kuba ngowona mfuno uphambili wokurisayikilisha izinto zokuhombisa.
I-04 yeemfuno zetekhnoloji yokufaka ziphezulu kwaye ziphezulu
Iimfuno mda ukhuseleko lwezixhobo zokuhombisa kunye nokulandela isiphumo sokuhombisa kuya kutshintsha kakhulu inkqubo elula yofakelo lweplastiki ekhoyo yePVC. Ukuze ubonise ngcono umphumo wokuhombisa weplastiki, umgangatho wobuchwephesha wenkampani yokufakela kunye nabasebenzi bokufaka baya kuba phezulu nangaphezulu, nto leyo eya kukhuthaza itekhnoloji yokwakha yomgangatho weplastiki we-PVC ukuba ikhule ngakumbi kwaye nomzi mveliso ube semgangathweni ngakumbi.
Ukwahlulwa kwabasebenzi kwimizi-mveliso kuye kucace gca nangakumbi
Ngokufana nenkqubo yophuhliso lweplastiki yasekhaya ye-PVC kule minyaka idlulileyo, iimveliso ezingenisiweyo zinokuthengisa okumiselweyo kunye nenkqubo yokufaka, kwaye icandelo labo labasebenzi licacile. Abathengisi bempahla eluhlaza baqhelene kakhulu nemathiriyeli kunye nokusebenza, ke bona bangabaququzeleli bokwakha abalungileyo, kwaye baye baba yenye yezona mpawu zibalulekileyo kumzi mveliso weplastiki weplastiki wasekhaya. Kwiminyaka embalwa ezayo, amashishini emveliso yeplastiki yasekhaya ye-PVC ayakufana. Abazukubonelela kuphela ngomgangatho weplastiki, kodwa baya kuba ngumxhasi wokwakha olungileyo weplastiki yePVC.
Ukuqiniswa koxinzelelo kwezomashishini
Nangona ukutyibilika kweplastiki kwi-PVC kungakhange kwenziwe ixesha elide e-China, iimpawu zayo zengingqi zicacile kwaye ishishini ligxile kakhulu. Kwenziwe iziseko zorhwebo ezininzi e-Hebei, Beijing, Jiangsu, Shanghai nase Guangzhou. Ngolwandiso oluqhubekayo lwesikali semveliso yamashishini ophawu lwasekhaya, uxinzelelo lweshishini luya kuqiniswa ngakumbi, kwaye ubunini buya kuba namandla ngakumbi, kwaye bukhuthaze intsebenziswano kunye nokudibana phakathi kwamashishini.
Umgangatho, PVC Sponge nokwadala, Umgangatho wekhaphethi, Ukuziva ukuxhasa isilwanyana kwiPet, PVC Ikhaphethi, Umgangatho wesiponji,